संपादकीय: आर्थिक बर्षको सुरुवातमै काम थाल्ने की ? « Phidim Today
संपादकीय: आर्थिक बर्षको सुरुवातमै काम थाल्ने की ?
Published on:5August, 2019 7:26 am
अघिल्लो आर्थिक बर्षमापनि अन्तिम समयमा काम गर्ने र बजेट फस्र्यौट गर्ने गलत परम्परा दोहोरीयो । उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, संघ सस्था र आफै सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामको चटरो असारमा निक्कै देखियो । यसपल्ट सडक निर्माण, मर्मत, भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम बर्खाको मुखमा भयो । यस्ले विकासको गुणस्तरको सवाललाई प्रश्न गर्ने ठाँउ दिन्छ भने अर्को तर्फ बजेटको सदुपयोगकको सवाल पनि उत्तिकै पेचीलो र गम्भीर बनेको छ ।
पूर्वाधारसँगै तालिम, गोष्ठिको लगायतका कार्यक्रमको उपलब्धि हिनताको निरन्तरताले हाम्रो विकासको पथलाई कमजोर बनाउने क्रम उस्तै देखियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष विशेष अपेक्षाको आर्थिक बर्ष थियो । स्थानीय तहले एक बर्षको अनुभव पछि ल्याएको बजेट थियो । न्यूतम हिसाबले पनि कर्मचारी र संरचना स्थानीय तहमा प्राप्त थियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उचित उच्च कामको मानसिकतामा काम गर्ने प्रसस्त अवसर थिए । अर्को तर्फ प्रदेश सरकारका पनि जिल्ला तहसम्म सरचना थियो । नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार थियो भने प्रदेशले पनि आफ्ना योजनालाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सक्थ्यो । दुर्भाग्य, समृद्धिको लक्ष र योजना बुन्दै गर्दा खर्च गर्ने तरीका, प्रणाली र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाको तेस्रो हप्ताको यो अन्तिम समयमा आइपुगेको छ । अव स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा गर्ने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडी बढाउनु आवश्यक छ । अब कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि कार्यतालिका बनाउन आवश्यक छ । बार्षिय लक्षलाई आधार बनाउन जरुरी छ । विगतलाई समिक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।
सडक निर्माणमा प्रयोग हुने स्काईब्रेटर लगायका मेसिनको रेटको समानता, राजनीतिक रुपमा सक्रियहरुलाई उपभोक्ता समितिमा नराख्ने, समन्वयको आधारमा भन्दापनि सार्वजनिक सूचना गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा तालिम, गोष्ठि गर्ने संस्थाहरु छनौट तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । सकारात्मक चिन्तनका साथ योजनाको प्राविधिक पक्ष, वातावरणी पक्षलाई हेर्दै अनुमगन तथा सफल कार्यान्वयन गर्नका निमित्त विशेष जोड दिनु पर्छ ।यसकालागि सुरुवाती दिनदेखिनै काम थालेर अन्तिम समयको चटारो रोक्ने प्रयास थाल्नु आवश्यक छ ।